Sochiin Warraaqsaa Jabaate; Wayyaanoti Qorannoodhaan Ummata Rakkisaa Jiru | QEERROO
Sochiin Warraaqsaa Jabaate; Wayyaanoti Qorannoodhaan Ummata Rakkisaa Jiru
(Qeerroo, Amboo, Gurraandhala 27,2012) Godina Shawaa lixaa aanaa Gindabarat ganda Bakkee Baldhaa jedhamu keessatti qorannoon mata dureen isaa “Eenyu Shakkamaan?” jedhu uummatni Oromoo irratti gaggeeffamaa akka jiru beekame.
Ummata “bulchaa jirra’ jettu irraa abdii kan dhaban ergamtooti Wayyaanee, yeroo ammaa kanatti diddaa ummataa itti hammaachaa jiru irraa sodaan waan itti buleef, guyyaa irraa guyyaatti qorannoo dhuma hin qabneen ummata dararaa akka jirtu beekamee jira.
Qeerroon akka gabaasetti, mootummaan Wayyaanee diddaa uummataa naannoo kanaa nin qulqulleessa jechuun dhama’aa akka jirtu barameera.
Misooma mootummaan kun uummatatti fakkeessee bittaa umrii isaa dheereffachuuf jedhus uummatni didee haala jiruu fi jireenya isaa akkasumas gaaffiilee mirga Oromummaa irratti diddaa muldhisaa jira.
Wayyaaneen milishootuma isaa kanneen amantamummaa irraa hin qabne qawwee irraa hiikuun isin degertoota ABO fi sochii yeroo ammaa deemaa jiru duubaan jirtu jechuun qorannoon rakkisaa jiraachuun beekama.
Haalli kun yeroo ammaa onoota lixa Shawaa keessatti bal’inaan gaggeefamaajira.
Aanaa Gindabarat keessatti gaafatamaa hojii mootummaa nama qabu Obbo Deebisaa Fifii Jaldee nama jedhamus qorannooma kanaan hedduu rakkisuun sochii qeerroo waliin hidhata qabda sababaa jedhuun qormaata jala galee rakkachaa jiraachuun beekama.
Uummatni Oromoo naannoo kanaas misooma inni duruu hojjenne faayidaa hin arganne,hamma mirgi ummata Oromoo waliigala kabajamutti karroorri mootummaan mishooma jedhu hin hojjetu jechuun diddaa isaanii bakka irraa bakkootatti ibsachaa jiru.